Ingane evuka ebusuku nge usinga: yini okufanele uyenze?
Ikhaya Nomkhaya, Izingane
ukuqwasha - yinto ngawo ezibhekene wonke, ngaphandle kokukhetha, abazali abasha. Izinsana abadinga a yokudla ebusuku, ngezinye izikhathi izingane zasenkulisa abasebasha ezimanzisa embhedeni noma avuke ezizwa isidingo ukuvakashela yangasese. Konke lokhu - izimo ngempela ezivamile zansuku zonke. Futhi uma ingane uvuke ebusuku nge akahlanye futhi ememeza, okuncane wakhala izinyembezi? Yini kungaba isizathu ukuziphatha okunjalo, ukuthi baziphathe kanjani abazali kulesi simo?
Kungani grudnichki ngizowondla?
Izindlela kuphela zokuxhumana omncane kunathi - liyakhala nokuklabalasa. Izinsana abawazi izidingo zabo siqu, futhi ikakhulukazi abakwazi ukuchaza ukuba abadala. Kuthiwani uma ingane encane kakhulu evuka ebusuku ne usinga? Ngokuvamile imbangela sigameko - izidingo bokuphila ingane. Usana bangezwa ukungakhululeki ngenxa namanabukeni singcoliswe, noma uba nomuzwa wokuthi le indlala. Ngezinye izikhathi izingane ezincane kakhulu uvuke ngenxa yokuthi uyabanda noma ushise kakhulu egumbini. Imbangela kungenzeka esikhathalela futhi beka ingane yakho ukuthi ilale. Uma ingane uyaqhubeka ukukhala isikhathi eside futhi akazange ukuzumeka, cishe wayengacabangi kangako ehlupheka ngenxa colic. Uma usola le nkinga, kunengqondo ngobumnene uhlikihla kwesisu womntwana.
Ebusuku iconsi ezinganeni ezineminyaka kuze kube iminyaka emithathu
Ukubukeka amazinyo lokuqala umntwana - lesi senzakalo esithinta inhliziyo, ngesikhathi lapho izingane eziningi uthola ukubuyisa. Ungamangali uma ngaleso sikhathi ingane evuka ebusuku ngikhala nokuklabalasa. Ziningi izindlela ukunciphisa ukungakhululeki umntwana teething. Indlela elula wabo - ukuthenga amathoyizi, teethers, okungase zidla futhi njalo gcoba izinsini womntwana ne ijeli ekhethekile. Kodwa nakhu ebusuku feeds esikhathini esidlule, namazinyo usukhulile ngokuphepha. Kuthiwani uma ngosuku olulodwa umntwana evuka ebusuku e hysterics? iminyaka engu-2 - lena engu ekhethekile. Izingane bayakwazi ukukhulumisana nabazali bazo, kodwa ukuphila kwabo nakho akwanele ukuba ngokunembile futhi ngokucacile bahlanganise yonke imicabango yabo. Empeleni, zonke izimbangela usinga ebusuku zingahlukaniswa izigaba ezimbili: bokuphila nezingokwengqondo. Esimweni sokuqala, ingane cishe ufuna ukuba ngikuphuzise, ukuya ethoyilethi noma uhlangabezana kwaba lokungahlaliseki. In the yesibili - usinga okubangelwa okwakwenzeka, okuvelayo ezicacile, noma ukushaqeka psycho-ngokomzwelo. Uma ingane evuka ebusuku ekhala hysterically njalo ngokwanele, kunengqondo uyibonise baya wezinzwa. Ngezinye izikhathi lokhu kuziphatha kuwuphawu iziyaluyalu isimiso sezinzwa. umhayizo Single kungase eyobonisa ukuqala kwe-ukugula acute.
Ukukhathala - imbangela iconsi ebusuku
Isikhathi esining impela ngezinyembezi, ngokukhala nangokububula ekhala ebusuku imilindelo ingane ekhathele emini. ingane yakho ukuhamba kakhulu, ukudlala imidlalo esebenzayo noma kwaba endaweni engavamile? Cishe isimiso sakhe sezinzwa iphelile. Kuthiwani uma ingane evuka ebusuku nge usinga emva kosuku umsebenzi? Buketa esimisweni usuku ingane bese uyazama hhayi overload isimiso sakhe sezinzwa. Khumbula iminyaka 5, zonke izingane kudingeka ephusheni suku. Izingane eziningi ziyathunjwa, ezama ukulahla lonke ntambama isivele engu-2. Kodwa ngisho noma kubonakala sengathi ingane uyazibekezelela ukungabi khona isithongwane ntambama, bavumelane umbuso kosuku, abazali akufanele. Beka ingane ukulala emini okungenani imizuzu engu-40-60. Le iholidi kubalulekile ukuze ethambile isimiso sezinzwa ingane.
Okuvelayo akuzona ewusizo njalo
Uhambo oluya e-zoo, uhambo ukuvakashela ugogo noma ukubuka opopayi egqamile - konke lokhu kuyizinto izenzakalo zangempela empilweni ndoda omncane. Gxilisa ingane yakho ingase uhambo ezijwayelekile endaweni ongayazi, noma uvakashele isitolo esisha. Abazali abaningi zama kusimangaze izingane nokwenza ukuphila kwabo elikhanyayo ngempela. Uma ingane evuka ebusuku nge akahlanye, ukukhala nokuklabalasa ngemuva ezenzekayo ezithakazelisayo futhi amadlingozi omuhle kosuku - ukuqonda lokhu kuziphatha kunzima. Kodwa eqinisweni, imbangela itholakala isimiso sezinzwa igcwele kakhulu. Uma ingane Kwamhlaba umxhwele kakhulu into engeyinhle, ephusheni ungabona a nightmare ephelele. Abazali kufanele azame ukunciphisa amathuba iconsi ebusuku ngesisekelo ngokweqile yokuvela. Khetha imisebenzi ngokuhambisana yobudala kwengane. Uma ufuna ukubonisa ingane yakho into engavamile, ukunciphisa inani lesikhathi lezi izizinda. Vikela ingane ukwaziswa okungekuhle. Amakhathuni kufanele ibe izithombe emihle kuphela, ukudluliswa omdala ukuba izingane ezincane akumelwe sibe sidlala ngesikhathi sonke. Lena kusihlwa yakho izindaba kubonakala kuyinto engasho lutho, kodwa ingane kungaba okwesabisa indaba mayelana nokusebenza yamasosha noma engemuva yomkhumbi izwi ummemezeli.
Ukucindezeleka nobunzima emkhayeni
Ukulala iziyaluyalu - ezivamile nemindeni isimo ngokwengqondo okungekuhle. Uma abazali ngokuvamile ziyaphikisana, ukukhuluma ngendlela ngezwi eliphakeme noma ukungalihloniphi nomunye, ingane isimo abhekene naso. Ngisho izingane ezincane kunazo intuitively uzizwe kwemizwa yasendlini omdala. Izinkinga zomkhaya ukwenza sezinzwa ingane. Kid zingase zibe novalo lokuthi omunye umzali ushiya umndeni, noma ngisho uzisole wena ezimpikiswaneni amadala. Okufanele ukwenze ezimweni ezinjalo? Zama ukuxazulula inkinga ngesikhathi impande yawo - ukusungula ubudlelwano emndenini.
Lapho umntwana ekhala, kodwa akazange avuke
Enye indlela iconsi ebusuku scares abazali ngaphezu kwabanye. Ezinye izingane Bayamemeza futhi ebusuku, akazange avuke kuze kube sekupheleni. umhayizo okunjalo ubukeka kusukela ngaphandle scary ngempela - ukuze uvuse ingane akusho ngaso sonke isikhathi kwenzeke zisuka, yena libhonga futhi writhes, ungakwazi dudula omdala esiduduzayo. Lapho ingane ekugcineni evuka kwamaminithi ambalwa kamuva, efika yena, eqalaza njengokungathi ubona konke ababemzungezile okokuqala empilweni yami. Okufanele ukwenze, umntwana evuka ebusuku nge akahlanye futhi awukwazi uvuke owamanqamu iphupho? Ochwepheshe batusa kakhulu ukuze uvuse ingane. Zama ukunqanda ingane, ngomusa pussycat ke, uqale ukukhuluma ngezwi elizolile noma uthathe ingane ngezingalo zakhe. Uma isheshe ithukuthele ngesikhathi sokulala aphindaphindwe njalo - qiniseka uthintane isazi sezinzwa.
Ingane evuka ebusuku nge usinga: yini abazali okufanele ayenze?
Ngezikhathi ebusuku iconsi kwenzeke zonke ingane. Imbangela abazali ukukhathazeka akuzona nje izehlakalo ezinjalo ningabi avamile. Kodwa kuthiwani uma ingane uphapheme futhi ememeza? Into ebaluleke kakhulu abazali kulesi simo - sihlale sizolile. Zama ukuthola ukuthi kungani abantu babesaba. Uma lihlotshaniswa izidingo bokuphila ingane, kufanele ukwanelisa. Lapho usinga kubonakala ingane engaphezu kuka-iminyaka emithathu, kunengqondo ukuzama embuzweni ingane Intandokazi isizathu sokukhathazeka yakhe. Mqinisekise ingane wambeka embhedeni, ahlale isikhashana lapho. Uma ingane evuka ebusuku nge akahlanye njalo ngehora, noma ngisha babé njalo, kunengqondo kudokotela ukucacisa inkinga futhi injongo ukwelashwa.
Rhinitis umntwana: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Amathoyizi izingane: umsuka kanye izimpande
Indlela agqoke ngayo lapho usana ekwindla: amathiphu
Iphrojekthi Environmental enkulisa. Imidwebo kanye nemisebenzi yezandla ezindabeni zemvelo
Hernia enkabeni ezinganeni: lapho usizo lwezokwelapha kuyadingeka
Kanjani ukuphoqa ingane ukwenza izifundo ngaphandle hysterics nokuklabalasa?
Kuyini kolwandle e-Bulgaria?
Ukukhetha ifoni eshibhe
Yini okufanele ugqoke ngejazi elimnyama ukubuka isitayela?
Logistics kanye-Supply Chain Management: incazelo, imisebenzi kanye nezici
Usofa ephasijini. Multi-functional nenhle
Shortbread indandatho namantongomane. itiye Recipe namakhekhe
Ukuthi baziphathe kanjani uma uthenga ifulethi? Yini ukubheka kwasekuqaleni?
Iphunga "uJeanne Lanvin": incazelo yephunga nokubuyekeza
Ultrasound kwesibindi: kokubusa umbhalo. Ubukhulu kwesibindi: omdala evamile
Yeka indlela ephakamisa ngokuba embhedeni ukhululekile futhi ezingokoqobo?
Carboxytherapy - kuyini? Carboxytherapy: Izimo, ukubuyekezwa kanye namanani
Isichibi for kwesisindo: elimazayo noma usizo?